Safal Khabar - क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितीको सहसंयोजकमा चितवनका दवाडीलाई किन दिने भोट ? हेरौ उनका एजेण्डा
क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितीको सहसंयोजकमा चितवनका दवाडीलाई किन दिने भोट ? हेरौ उनका एजेण्डा
बुधबार, १८ असार २०७६, १२ : ३०
चितवन । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको सहसंयोजकमा उम्मेदवारी दिनुभएका चितवनका प्रमोद दवाडीले आफ्नो एजेण्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
भरतपुर ११ गोर्खाली टोल निवासी दवाडीले यसअघि अष्ट्रेलिया र नेपालका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्नुभएको थियो । उहाँले २०१७ र २०१९ मा एनआरएनए अष्ट्रेलियाको राज्य समन्वय समितिमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ ।